महिनावारीमा अत्याधिक पेट दुख्छ ? जान्नैपर्छ यस्ता कुरा (स्वास्थ्योपयोगी टिप्ससहित) « Lokpath
२०७७, २४ माघ शनिवार १२:०६
प्रकाशित मिति : २०७७, २४ माघ शनिवार १२:०६
महिनावारी समयमै भएन ?
के तपाईको महिनावारी समयमै भएको छैन ? वा तपाईको पार्टनर यो समस्याबाट जुधिरहनुभएको छ ? यदी त्यसो हो भने आज हामी तपाईलाई सिर्फ केहि महत्वपूर्ण बानीबारे जानकारी दिदैँछौँ । तपाईले त्यो बानी परिवर्तन गर्नुभयो भने यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ ।
के हो त त्यो बानी ?
विहान उठेपछि हरेक दिन २ गिलास मनतातो पानी पिउने
इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनले युवा अवस्थामा पुरुषलाई प्रतिदिन तीन र महिलालाई दुई दशमलव दुई लिटर पानी पिउनुपर्ने बताएको छ । उसले आफ्नो अध्ययन रिपोर्टमा लेखेको छ- बिहानै नियमित मनतातो पानीको प्रयोग र नियमित शारिरीक व्यायाम र योगाभ्यासले महिलाहरुको महिनावारी समेत समयमै हुन्छ ।
धेरै महिलाहरु नियमित रुपमा महिनावारी नहुने समस्याबाट जुधिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको लागि यो निकै उपयोगी सिद्ध हुन्छ ।
महिनावारी समयमै नहुँदा महिलाहरुलाई गाह्रो महशुस हुने र महिनावारीपछि अत्याधिक शारिरीक पिडा हुने गर्दछ।
अध्ययनअनुसार धेरै जसो महिलाहरुमा खानपान र जीवनशैलीका कारण समयमा महिनावारी हुँदैन।
चिकित्सकका अनुसार मूलत: महिनावारीका बेला जुन अण्डा फुट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अण्डा नफूटेमा समयमा महिनावारी नहुने सम्भावना बढी हुन्छ।
चिकित्सक थप्छन्, ”महिनावारी हुने बेलामा पाठेघर खुम्चिने भएकाले पेट दुख्छ । त्यसैमाथि महिनावारी गडबड भएमा झनै पेट दुख्छ । ९९ प्रतिशतलाई महिनावारी हुनुअघिदेखि महिनावारी हुने बेलासम्म पनि पेट दुख्छ।”
यस्तो हुनुको पहिलो कारण तपाईले सेवन गर्ने औषधि हो । महिनावारी पर सार्ने वा अन्य शारिरीक समस्याको लागि तपाईले खानुभएको औषधिले महिनावारी गडबड भएको हुनसक्छ ।
धेरै मोटोपनाको कारण पनि महिनावारीमा गडबडी हुन्छ ।
शरीरले उत्पादन गर्ने हर्मोन ब्यालेन्समा भएन भने पनि महिनावारी रोकिने गर्दछ।
तपाईलाई डिप्रेसन वा कुनै मानसिक शारिरीक तनाव /दर्द भएमा यस्तो समस्या हुने गर्दछ ।
धेरै शारीरिक व्यायाम गर्ने महिलाहरुमा पनि र व्यायाम नै नगर्ने महिलाहरुमा महिनावारीको समय गडबडी हुने गर्दछ ।
तनाव, भागदौड, मानसिक तनाव, खानपान, धूमपान, मध्यपान आदिले ‘हर्मोनल इम्ब्यालेसन्स’ हुन्छ र महिनावारीमा गडबड हुन जान्छ । त्यतिमात्रै होईन पाठेघरको मुखमा घाउ, ट्युमर वा क्यान्सर छ भने महिनावारीमा गडबड हुन सक्छ ।
परिवार नियोजनको अस्थायी साधनले गर्दा पनि महिनावारीमा गडबड हुन सक्छ ।
खानपानमा ध्यान नदिकन बढी जंगफूड खानाले पनि यस्ता समस्याहरु आउने गर्दछ। यी त भए समान्य अवस्थाका सुझाव तर नियमित महिनावारी हुने महिलामा गडबडी भयो भने के कारणले भयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ। र समयमै उपचार गर्नुपर्छ ।
डा. सुशीला वैद्य भन्नुहुन्छ, ”महिनावारी गडबड भएको खण्डमा पाठेघरमा समस्या छ कि भनेर अल्ट्रा साउन्ड गराएर हेर्नुपर्छ।”
कसरी बच्ने यस्तो समस्याबाट ?
– पहिलो कुरा त हरेक बिहानबाट आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
– महिनावारी गडबड हुन नदिन तनाव थकान, काम, भागदौडको जीवनशैली, खानपान, सोँच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
– पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ । शरीरमा चाहिने तत्व पुगेको हुनुपर्छ ।
– गर्भ निरोधक चक्की वा अस्थायी साधन प्रयोग वा अनिच्छित गर्भाधारण रोक्न प्रयोग गरिने औषधिमा निकै ध्यान दिनुपर्छ ।
के महिनावारीका बेला यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ ?
चिकित्सकका अनुसार महिनावारी हुँदा यौनसम्पर्क गरेमा गर्भ रहन जाने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ । तर महिनावारी भएको बेलामा यौनसम्पर्क गर्दा अरु संक्रामक रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले महिनावारीका बेलामा (रक्तास्राव हुँदासम्म) यौनसम्पर्क नै नगरेको उत्तम हुन्छ । यसैपनि महिला यो बेलामा निकै कठिन पिडामा हुन्छिन् । यसबेला उनलाई पौष्टिक खानपान, माया हेरचाहको खाँचो हुन्छ । बरु यौनसम्पर्कका लागि दबाब दिनुभन्दा पार्टनरको हेरचाहमा समय दिनु राम्रो हुन्छ । यसले यहाँहरुको प्रेम सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ ।
किन कसैलाई अत्याधिक पेट दुख्छ ?
एकाध महिलालाई छोडेर अधिकांशले गर्ने प्रश्न हो यो । कतिपय महिलालाई महिनावारीमा अत्याधिक पेट दुख्छ । यसको समाधान घरमा नै तातो झोल पदार्थको सेवन, हलुवा अभ्यास र मनतातो पानीले नुहाउनु नै हो । यसो गर्दा पीडा केहि कम हुन्छ ।मन तातोपानीमा खुट्टा डुबाएर बस्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
डाक्टर बैद्यका अनुसार महिनावारीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । महिनावारी भएको समयमा संक्रमण हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । रगत यस्तो माध्यम हो, जसमा जिवाणु छिटो हुर्किने गर्दछन् । रगत बगिरहेको छ तर सरसफाई छैन भने संक्रमण हुने गर्दछ । त्यसैले यसबेलामा निकै सरसफाई गर्नुपर्छ ।
अत्याधिक पेट, ढाड र कम्मर दुख्छ ? यस्ता छन् दुखाई कम गर्ने घरेलु उपाय
साधारणतया १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरू हुन्छ महिनावारी अर्थात् (Menstruation) । कसैमा आठ वर्ष देखि नै महिनावारीको लक्षण देखिने गर्दछ जुन साधारण मानिन्छ । महिनावारीको अन्तर लगभग २८ दिन हुने गर्दछ । महिनावारी महिला ४५ देखि ५५ वर्षभित्रमा रोकिन्छ ।
रुमाल वा आधा मिटर जति सुतीको कपडाको टुक्रालाई तातो पानीमा भिजाएर र पेटको वरिपरि सेकाउन सकिन्छ ।
तातो पानीलाई रबडको थैली (Hot bag) मा राखेर दुखेका ठाउमा विस्तारै सेक्न पनि सकिन्छ । रबडको थैली नभएका खण्डमा सिसी (Bottle) मा तातो पानी राखी दुखेका ठाउमा सेक्न सकिन्छ ।
दुखेका ठाउमा विस्तारै हलुका मालिस गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ ।
यस्तो बेला जति सक्दो तातो पानी, चिया र सुपका साथै अन्य गेडागुडीको झोल, हरियो सागसब्जी खानु पर्छ जसले शरीरलाई कमजोर हुन दिदैन ।
हलुका व्यायाम गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ ।
स्कूल /कलेज नै जान नसक्ने गरी पेट दुख्छ ?
महिनावारी हुनुअगाडी, भएको बेला र रगत आउँदासम्म कसैलाई धेरै नै पेट दुख्ने गर्छ। महिनावारीबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा स्कुले किशोरीले निकै असजिलो महसुस गर्छन् । कसैले पढाई छाडेर घरमा नै बस्छन् । प्रायःकिशोरीहरुमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्षसम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइदैन। महिनावारीको समयमा कहिले– कसैलाई धेरै रक्तश्राव भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई कम रक्तश्राव हुने गर्छ। तर, यो सामान्य प्रक्रिया हो। झण्डै चालिस प्रतिशत किशोरीमा यस्तो समस्या देखापर्छ। तर अत्याधिक रगत देखिनुका साथै पेट दुखेको खण्डमा अनि धेरै दिनसम्म रगत भइरहेमा वा महिनामा दुईपटक वा २८ दिनबाट ७ दिन छाडेर ढिला भएमा तपाईले चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
१) दुध : दुध क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो, महिनावारीको पीडालाई कम गर्न एक ग्लास दुध पिउने गर्नुहोस् यसले क्याल्सियमको कमीलाई पुरा गरीदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ ।
२) मेवा : महिनावारी भएको बेला खानाले फाइदा पु-याउँछ । धेरैपटक महिनावारीको दौरान रक्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने गर्दैन जसका कारण अझ पीडा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले रक्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ ।
३) गाजर : गाजरले आँखाको लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई महिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ । स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार, एक ग्लास गाजरको रस पिउनाले महिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ ।
४) घिउकुमारी : महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गन गर्र्दछ ।
५) तुलसी : पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस् । तुलसीमा भएको क्याफीड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्न गर्दछ । धेरै पीडा भइरहेको छ भने ७–८ वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस् ।
६) तातो पानीले नुहाउनुहोस् : तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।
७) अदुवा : एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस् । यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन चार पटक खाने गर्नुभयो भने पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
८) व्यायाम : हुन त हामीले दिन दिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ तर महिनावारीको पीडा भएको बेलामा व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो । उक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
९) खजुर : बिहान हरेक दिन खाली पेटमा ५० ग्राम भिजाएको खजुर खाने पानी पनि लाभदायिक हुन्छ ।
१०) चुकन्दरको ताजा रस : सानो गिलासको ,१ गिलास (200ml) दैनिक बिहान १ महिना सम्म पिउनाले आइरन क्याल्सियम र अन्य मिनिरलसको मात्रा बढी पाइने हुँदा दुखाईलाई मद्दत पुग्दछ ।
तुलसी पत्ताले पार्न सक्छ छुमन्तर !
१० ग्राम तुलसीको दानामा पानी उमालेर नियमित रुपमा विहान पिउने ।
तुलसीको चिया, यसको पानी वा यसको पात खाने ।
महिनावारीको बेला पेट दुख्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन। यो सामान्य प्रत्रmिया हो । हरेक महिलालाई यस्तो अवस्थामा पीडा हुन्छ फरक यत्ति हो कि यो पीडा थोरै वा धेरै हुन्छ ।
महिनावारी भएको बेलामा पेट दुख्नु सामान्य लक्षण हो। अलिकति पीडा हुनासाथ औषधीको सेवन हानीकारक छ ।
यसले किशोरीलाई एकदमै धेरै पीडा दिन्छ तर यो राम्रो संकेत हो। जुन किशोरीलाई महिनावारीको समयमा पीडा हुन्छ त्यस्ता किशोरीको प्रजनन क्षमता राम्रो हुन्छ,त्यसैले महिनावारीमा पेट दुख्नुलाई नराम्रो मान्न नहुने चिकित्सक बताउँछन् । धेरै मोटोपना र दुव्लोपनाका कारणले पनि महिनावारी नियमित नहुने समस्या हुन्छ। यस्ता समस्या भए तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्दछ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिपय मुलुकमा महिनावारीका समयमा कामकाजी महिलालाई बिदा दिने समेत चलन समेत छ । नेपालमा त्यो चलन छैन । तर कार्यालयमा पनि तपाईँले साथीभाईको सहयोग लिएर आराम गर्न सक्नुहुन्छ । वा हलुका काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
महिनावारी भएको बेला पेट, ढाड , कम्मर दुख्नु, खपि नसक्नु पेट दुख्ने, वाकवाकि लाग्ने , खान मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न समस्या हुने हुन्छ । कतिपयलाई यो लक्षण लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ । केहि युवतिले दुखाई सहन नसकेर आफूखुसी औषधी सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । तर यसो नगर्न चिकित्सकले सुझाएका छन् ।